FJ6-JTS2EB dingana tokana Din lalamby karazana fifandraisana alalan'ny terminal Max Inlet tariby: 120.150 MM toradroa - China Haiyan Terminal Blocks
Find ny vokatra
FJ6-JTS2EB dingana tokana Din lalamby karazana fifandraisana alalan'ny terminal Max Inlet tariby: 120.150 MM ny taona
FJ6S andian-dahatsoratra alalan'ny terminal andian-tsoratra (be pitsiny karazany) dia natao manokana ho an'ny isan-karazany fitsipika wiring fizarana fitaovana fanaraha-maso ny herinaratra, feno milentika, multi-faritra metatra boaty sy mitambatra alalan'ny terminal karazana tarika boaty. Ny laharana insulation malefaka dia 690V, Misy laharana miasa malefaka 380V, Max laharana miasa amin'izao fotoana izao 630A. Ny farany Inlet azo mifandray amin'ny mpitarika ny ny 6mm 2~ 185mm 2 in sectional faritra, ny fivoahan'ny farany 2.5mm 2~ 185mm 2 amin'ny faritra sectional araka ny faritra sy ny wiring isan'ny fomba. Ny vokatra manana tombony ny rafitra tantara, azo antoka wiring, mety fandidiana.
FJ6S andian-dahatsoratra alalan'ny terminal andian-tsoratra atao ny mpitarika ny herinaratra, dabilio insulator sy miaro fonony. Ny fampidirana vatana mandany fanorenana rafitra andian-tsoratra fomba fivoriambe, amin'ny fanorenana be pitsiny, tsara tarehy tarehiny sy ny rafitra azo antoka. Ny farany Inlet azo mifandray amin 'ny mpitarika mivantana (tsotra fametrahana) na ny fivoahan'ny amin'ny OT alalan'ny terminal (tsipika Lug) ary mifandray amin'ny fomba wiring lovia. Tsy mandany hery ambony toy ny mpanao gazety napetraka visy tsipika visy, ary mampiasa manokana boribory ambany, izay miantoka ampy tsindry amin'ny mpanao gazety tsipika tsy manimba azy io, ary mahatonga azo antoka fa misy ny azo antoka mikasika.
Fametrahana sy ny asa
Io andian-dahatsoratra ny vokatra dia manome karazany roa ry ampy fomba fametrahana: 1. Hifantohan'ny karazana, fandavahana lavaka eo ambany lovia, ary hametraka directly.Mounting visy dia M5; 2. dalamby fitomboan'ny karazana, hametraka ny TH-35 lalamby. Soso-kevitra maro izahay nampiasa-tsipika fototra toy ny Inlet tariby, rehefa nampidirinay ny mpitarika ny jamba lavaka, ho azo antoka fa ny mpitarika dia tokony ho nampidirina tanteraka fa afaka Sokiro ny bolt teo, raha tsy izany, dia mety hanao ratsy fifandraisana. Rehefa sectional faritra ny Inlet tariby dia fa kely, fa ny tariby anjara insulation azo voaporitra any an-fifandraisana lavaka, eo amin'ny faritry ny azo antoka mikasika ny mpitarika, ny insulation anjara dia avela fidirana ny fifandraisana lavaka. Rehefa te hanokatra ny fiarovana fonony ny miasa na fikojakojana, fotsiny hatreo amoron'ny fiantraikany ny ampahany amin'ny fonony miaro amin'ny tanana mba hanala ny rakotra fanaovam-panavotana, na ampidiro ho eo an-hatreo amoron'ny visy anjara amin'ny alalan'ny mpamily sy hanodinana ny kely mba hanala ny rakotra fanaovam-panavotana.
Fampahafantarana ny mba
Rehefa mametraka baiko, azafady maneho ny modely (na ny filaminana No.) sy ny habetsahana mazava tsara. FJ6S andian-dahatsoratra alalan'ny terminal azo namboarina andian-tsoratra maro samihafa tsy Inlet fitsipika sy ny fivoahan'ny haben'ny tariby.
FJ6S-1 Inlet efatra-jery maro karazana Din rail ...
Din rail karazana Multi-tanjona alalan'ny terminal andian-tsoratra, Max ...
FJ6-JTS2EB Telo Dingana efatra Wire Din rail karazana ...
FJ6S-1 Inlet iray-jery maro karazana Din lalamby d ...
FJ6-JTS2EB Single tsato-kazo Din lalamby karazana fifandraisana ...
FJ6S andian-dahatsoratra manokana Multi-karazana asa enclose ...